ဦးဩ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဦးဩ (၁၀၉၈ - ၁၁၄?) သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးတွင် ထင်ရှားခဲ့သည့် စာဆိုတော်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ 
၅ စာပေများ ရေးသားခြင်း
သက္ကရာဇ် ၁၀၉၈ ခုတွင် အလုံစီရင်စုအထက်တိုက် မောင်းထောင်ကြီးရွာနေ ဦးဇေယျနှင့် (တွင်းသင်းတိုက်ဝန် မဟာစည်သူ၏ အစ်မ) ဒေါ်ပုတို့မှ ဖွားသည်။ 
ငယ်စဉ်က မောင်းထောင်ကြီး ရွှေဓားကန်ကျောင်းတိုက် အရှင်စန္ဒသာရ၊ အရှင်ဂုဏသာရတို့ထံ၌ ပညာသင်သည်။ နောက် ဦးရီးတော် အရှင်လင်္ကာသာရ (နောက် တွင်းသင်းတိုက်ဝန် ဖြစ်လာသူ) ရှိရာ အင်းဝ၌ ပညာထပ်ဆည်းပူးသည်။ ထိုကျောင်းနေ ပထမကျော်အောင်စံထားဆရာတော်ထံတွင်လည်း ပညာယူသည်။
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ရှင်လိင်ပြန်သည့်နောက် ပထမကျော်အောင်စံထားဆရာတော်က ဟံသာဝတီရောက်မင်းထံအပ်သည်။ မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိဘွဲ့ခံမင်းက ဘထွေးတော် တောင်ငူရာဇာ သီရိသုဓမ္မရာဇာဓိပတိ သတိုးမင်းခေါင် [မှတ်စု ၁]ထံတွင် အမှုထမ်းစေသည်။ ရွှေတောင်ရာဇကျော်ဘွဲ့ [မှတ်စု ၂] သံတော်ဆင့်အရာဖြင့် ထမ်းရသည်။
တောင်ငူရာဇာ၏ တိုက်တွန်းချက်ကြောင့် ကဝိလက္ခဏသတ်ပုံကို စပ်ဆိုရာ ၁၁၁၃ ခု တော်သတင်းလဆန်း ၁၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ (၁၇၅၁ ဩဂုတ် ၂၀) တွင် ရေးပြီးသည်။
အင်းဝပျက်သည့်အခါတွင် ရွှေဘိုသို့ပြောင်းကာ ဦးအောင်ဇေယျထံ ခစားသည်။ အလောင်းဘုရားက စိန္တကျော်သူဘွဲ့ပေးခဲ့သည်။ သားတော် ဗဒုံမြို့စား သတိုးမင်းလှရွှေတောင်ထံ၌ စာဆိုနှင့် အကြီးတော်အဖြစ် ထမ်းရွက်စေခဲ့သည်။
ဗဒုံမြို့စား မင်းဖြစ်သော် ဦးဩအား မဟာဇေယျသင်္ခယာဘွဲ့ ချီးမြှင့်သည်။ ဆင်ချေးတိုက်ဝန်အဖြစ်လည်း အမှုထမ်းခဲ့ဖူးသည်။
ဒေါ်ကေးနှင့် ဒေါ်မင်းသာ ဟူသည့် ဇနီးနှစ်ဦး ရှိသည်။ 
ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် သက္ကရာဇ်ကို မသိရပေ၊ ၁၁၄၅ ခုနှစ်ကျော်မှ ကွန်လွန်ခဲ့သည်။ [မှတ်စု ၃]
ဦးဩသည် အောက်ပါစာပေများကို ရေးသားပြုစုခဲ့သည် -
ဩဝါဒထူး ပျို့ (၁၁၂၂)
ဓနုဖြူတွင် ချီ စစ်ချီရတု
အမြင့်မင်းနှင့် တူမတော် လက်ထပ်ရတု
ဘိုးတော်ရှင် ဧချင်း (၁၁၁၉)
မင်းဆက် လင်္ကာကြီး (၁၁၂၁)
စမ္ပေယျ ပျို့သစ် [မှတ်စု ၄] 
↑ မင်းရဲကျော်ခေါင်ဟု မူကွဲရှိသည်။
↑ ရွှေတောင်ရာဇကျော်မှာ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်ဟုလည်း အချို့မှတ်ယူကြသည်။
↑ ၁၁၃၃ ခုတွင် လွန်သည်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။
↑ ပိဋကတ်တော်သမိုင်း၌ မိုးထားဝန်ထောက်စိန္တကျော်သူဟု ဆိုသည်။ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ လှသမိန် (၁၉၆၁ ခုနှစ်)။ ဂန္ထဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိပေါင်းချုပ်။ ၃၅၇၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ဟံသာဝတီစာအုပ်တိုက်။ pp. ၂၁၉၊ ၂၂၀၊ ၂၂၁။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)CS1 maint: location (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဦးဩ&oldid=512521" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၀၃:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။